Qaramada Midoobay oo ka hadashay xaalka dhalinyarada Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, 12 Agoosto – Halkudhiga sanadkan “Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada” waa “Caafimaad dhalinyaranimo iyo mid maskaxeed”. Waxaa jira dalal kooban oo caafimaadka maskaxeed uu ka yahay arrrin ahmiyad leh sida Soomaaliya uu uga yahay.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waxay ku koreen dal ay si joogto ah uga dhacaan xadgudubka iyo fal-dembiyeedka. Qaar badan oo kamid ah waxaa lagu khasbay in ay ku biiraan kooxaha hubeysan ama si iskood ah ayey (dhalinyaradu) ugu biireen kooxahaas maadama aanay helin wado kale oo ay kasab/lacag ku helaan. Qaar kale waxay ku koreen jidadka amaba waxay waalidkood ku waayeen colaada.
Waayo-aragnimada noocaan oo kale ah ma ahan mid uu xamili karo deegaan kasto, laakiin waxayba kasii adagtahay in (arrimahaasi ka dhacaan) wadan aan aarinta adeega caafimaadka maskada lagu siinin mudnaan amaba ay hooseeyso (heerka mudnaanta). Inta badan, shakhsiyaadka maskaxiyan ay wax u dhimanyihiin ayaa laga faquuqaa qaabaynta iyo hirgelinta siyaasada ay ku dheehantahay horumarka iyo qorshooyinka kae. Dadkaani xataa waxaa loo diidaa xanaanaynta asaasiga ah waxayna ku dambeeyaan in ay noqdaan dadka ugu faqrisan ama dagaalka galo, bulshadane laga takooro, oo ay cadow u noqdaan umadda si guud.
In kasta oo ay jiraan dhamaan caqabadaha aan soo sheegnay, dhalinta Soomaaliyeed waxay weli muujinayaan in ay leeyihiin rajo aad u weyn ee la xiriirito aayaha ama mustaqbalka wadankooda. Waxay doonayaan in ay helaan fursado ay ku aadaan iskuulka kuna biiraan cududa shaqeysa. Waxay doonayaan in la dhageysto kana qeyb galaan siyaasada iyo dib udhiska qarankooda. Waxay doonayaan in ay ka qeyb qaataan qaabeynta mustaqbalkooda hadii la siiyo fursad, dhalintu waxay leeyihiin awoodi ay garwadeen uga noqon lahaayeen arrimaha nabadda iyo xasiloonida.